संसद भवनमा पस्यो कोरोना, प्रवक्ता पाण्डेमा कोरोना पुष्टि – AIM Khabar
गृह पृष्ठ > स्वास्थ्य > संसद भवनमा पस्यो कोरोना, प्रवक्ता पाण्डेमा कोरोना पुष्टि
संसद भवनमा पस्यो कोरोना, प्रवक्ता पाण्डेमा कोरोना पुष्टि
August 6, 2020 August 6, 2020 Nepal Correspondent50
काठमाडौं । काठमाडौंको संघीय संसद भवनमा पनि कोरोना प्रवेश गरेको छ । संघिय संसदका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) पुष्टि भएको छ ।
उनलाई कोरोना पुष्टि भएसंगै उनको सम्पर्कमा रहेकाहरुको पनि कोरोना परिक्षण गरिएको छ । संसद सचिवालय स्रोतका अनुसार कोरोना परिक्षणका लागि पाण्डेको स्वाव मंगलबार दिइएको थियो । त्यसको परिणाम शुक्रवार आएको हो । उनको कोरोना रिपोर्ट पोजेटिभ आएपछि सम्पर्कमा रहेकाको खोजी गरिएको थियो । पाण्डे प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रदिप यादवसहितको टोली वन व्यवस्थापनको अनुगमनका लागि केही दिनअघि सिन्धुली गएका थिए ।
यादव सांसदको सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यसमेत हुन् । यादवमा कोरोना पुष्टि भएपछि उनीसँगै गएका पाण्डेसहित ८ जनाको स्वाब संकलन गरेर परीक्षणका लागि पठाइएको थियो । पाण्डेमा पुष्टि भए पनि उनीसँगै गएका अन्य सदस्यको भने रिपोर्ट नेगेटिभ आएको बताइएको छ ।
यो अर्को समाचार, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कार्यरत थप २२ कर्मचारीमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) पुष्टि भएको छ। मंगलबार १५ सुरक्षाकर्मीको रिपोर्ट पोजिटिभ आएपछि संकलन भएको स्वाब परीक्षण रिपोर्टमा थप २२ जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो।
१५ सुरक्षाकर्मीमा कोरोना पुष्टि भएपछि अख्तियारका आयुक्तसहित सबै कर्मचारीलाई होम क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो। स्वाब संकलनपछि भएको परीक्षणमा थप २२ जनामा कोरोना पुष्टि भएपछि अख्तियारमा मात्र कोरोना कोरोना पुष्टि हुनेको संख्या ३७ पुगेको छ।
चेपाङ वस्तिमा सरकारको बम्पर प्याकेज ।
नेम्वाङलाई प्रचण्डले भने–’एकता विरोधी काम रोक्न अध्यक्ष ओलीलाई सुझाव दिनुस्’
May 24, 2020 May 24, 2020 Raju Thapa
बेलायतमा कोरोनाको संक्रमणबाट अर्का नेपालीको मृत्यु भएको पुष्टि
थप तीन जनामा कोरोना संक्रमण, संक्रमितको संख्या २४९
May 14, 2020 May 14, 2020 GRISHI
एनआरएनए अमेरिकाजको ‘रिजनल नलेज कन्भेन्सन’ सेप्टेम्बर ४ बाट सुरु हुँदै !
September 2, 2020 September 2, 2020 Raju Thapa
‘एरिन ओ टूल’ले कन्जर्वेटिभ पार्टि क्यानडाको नेतृत्व दौड जिते ।
August 24, 2020 August 24, 2020 Raju Thapa
टोरोन्टोमा मैत्रीपूर्ण फूटबल खेल सम्पन्न: एनआरएन क्यानाडा र किड्स (रातो) बिजयी !
August 23, 2020 August 24, 2020 Raju Thapa
बिल मोर्नीको राजीनामा पछि क्रिष्टिया फ्रिल्याण्ड क्यानडाको प्रथम महिला अर्थ मन्त्रीमा नियूक्त ।
August 18, 2020 August 19, 2020 Raju Thapa
रुसले २ करोड ५० लाख डोज कोरोना भ्याक्सिन नेपाल पठाउँने
पूर्वमाओवादीभित्र खेल्दै ओली, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन मौका
उपभोक्ता ठगी गर्ने शंकर ग्रुपका मालिकलाई तक्मा
भागबण्डा नमिल्दा अख्तियारको पदाधिकारी नियुक्तिमा सकस
२०२० भित्र ६१ करोड मात्रा खोप उत्पादन गर्ने चीनको दावी
विचौलियाले पार्टी कब्जा गरे,घनश्याम भुसाल नै नेतृत्वमा आए पनि केही हुँदैन : रामकुमारी झाँक्री
इजरायलले ५ सय नर्स लैजाने, तलब १५ सय अमेरिकी डलर
कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिनमा हालसम्म ३ अर्ब डलर लगानी